मलेसियाले १० हजार कामदार मागेको कुरा हल्ला होईन,नेपालबाट कति माग छ फिक्स छैन ? - jagritikhabar.com
मलेसियाले १० हजार कामदार मागेको कुरा हल्ला होईन,नेपालबाट कति माग छ फिक्स छैन ?
मलेसियाले यसै महिना देखि पहिलो चरणमा करिब १० हजार कामदार ल्याउने निर्णय गरेको छ । मानव संसाधन मन्त्री दा’तुक सेरी एम. सरावननका अनुसार इन्डोनेसिया कामदार निर्माण क्षेत्रमा, उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्ने र घरेलु कामदारहरू ल्याउने भएको हो। ‘मलेसिया र इन्डोनेसियाबीच अन्य सबै क्षेत्रका कामदारलाई पनि भित्र्याइने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि प्रारम्भिक चरणमा ५ हजारदेखि १० हजार कामदार भित्राउने प्रस्ताव गरेको हो।